मतदाताको अर्को नयाँ परीक्षण, के दुई तिहाई आउँछ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मतदाताको अर्को नयाँ परीक्षण, के दुई तिहाई आउँछ ?
देशभरीका आधा भन्दा बढी ठाउँको निर्वाचन क्षेत्रको प्रारम्भिक मतपरिणाम आइसकेको छ । दिउँसो २ बजेसम्म ९२ क्षेत्रको मतपरिणाम आएको छ । चुनावमा कुन पार्टीले जित्छ ? कुन–कुन दल राष्ट्रिय पार्टी बन्छ ?त्यो बहस सकिएको छ । चुनावी नतिजाले कसले जित्छ भन्ने पक्का भइसकेको छ । तर अहिलेसम्मको आएको नतिजा र मतपरिणम हेर्दा के दुई तिहाई आउला त ?अहिले यो बहस सुरु भएको छ । प्रत्यक्षमा दुई तिहाई आउने देखिएकाले समानुपातिको के होला चासो त्यसमा पनि देखिन्छ ।
२०७० सालको संविधानसभाका ६०१ सभासद्मध्ये एमालेका १८४ जना माओवादीका ८४ जनाले जिनते । प्रत्यक्ष र समानुपतिक दुबै जोड्दा दुवै दलले संविधानसभामा २६८ सिट ल्याएका थिए । त्यो भनेको ६०१ को ४४.६ प्रतिशत हो । यसले बहुमत पुग्दैन । केही महिनाअघि भएको स्थानीय चुनावमा पनि एमाले र माओवादी प्रतिस्पर्धा गरेरै चुनाव लडेका थिए । एक्लाएक्लै लड्दा पनि ७५३ स्थानीय तहमध्ये एमाले एक्लैले २९४ स्थान जित्यो माओवादीले १०६ स्थानमा विजयी हाँसिल गर्यो ।
कांग्रेसले २६६ मेयर र अध्यक्ष जितेको छ । अर्थात् एमाले र माओवादीले एक्लाएक्लै लडेर पनि ७५३ मध्ये ४०० स्थानमा जितेकाले यो बहुमत भन्दा केही बढी ५३ प्रतिशत हो । दुबै मिलेर उठेका भए उनीहरुले कति मत ल्याउँथे यकिन छैन । तर २०७० सालको संविधान सभामा एमाले र माओवादी उम्मेद्वारले पाएको मत जोड्ने हो भने त्यसले केही संकेत भने गर्छ ।
२०७० सालमा एमाले र माओवादी एउटै भएर उठेको भए प्रत्यक्षतर्फका २४० मध्ये १९९ अर्थात् ८३ प्रतिशत सिट जित्ने रहेछन । त्यो हिसाव निकालेर पनि यसपटक दुईदलले वामगठबन्धन सहितको तालमेल गरेका हुन् ।
२०७० सालको संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २६ प्रतिशत, एमालेले २४ प्रतिशत र माओवादीले १५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । स्थानीय चुनावमा ल्याएको मत जोड्दा एमालेले जम्मा खसेको मतको ३४ प्रतिशत, कांग्रेसले ३३ प्रतिशत र माओवादीले १७ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।
एमाले र माओवादीले समानुपातिकमा ५० प्रतिशत मत ल्याए भने दुई तिहाईका लागि प्रत्यक्षमा ७७ प्रतिशत अर्थात् १२८ सिट जित्नुपर्छ । त्यति सिट जित्न के सम्भव छ ? अहिलेको प्रारम्भिक मतपरिणमको संकेतले असम्भव छैन भनेको छ ।
स्पष्ट बहुमत सजिलै आउने देखिन्छ दुई तिहाई निकै कठिन देखिन्छ । यसपालि थ्रेसहोल्डका कारण धेरै साना पार्टी भने संसदमा पुग्ने छैनन् । २०४८ देखि नै नेपाली मतदाताले सिहंदरबारमा बसेका हेरक पार्टीलाई सत्ताबाट उतारेका छन् । र निरन्तर परीक्षण पनि गरिरहेका छन् ।